News - Ekele maka ihe ịga nke ọma nke weebụsaịtị nke Weipu Electric Co., Ltd.
Ekele maka ihe ịga nke ọma nke weebụsaịtị nke Weipu Electric Co., Ltd.
Guangzhou Weipu mechanical na Electrical Co., Ltd. bụ ọkachamara na ịmepụta ngwaọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ahụmịhe bara ụba gbakọtara kemgbe ọtụtụ afọ emeela ka Weipu bụrụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè n'ọhịa nke ngwa eletriki na China. N'otu oge ahụ, Weipu bụkwa onye so na "National Technical Committee maka nhazi nke ngwa eletriki" nzukọ.
Na Weipu, àgwà bụ ọnọdụ kachasị mkpa. Anyị nwere ọkachamara R & D otu, elu-edu mkpara, oge a na mmepụta ngwá, zuru okè ule laabu. Na mmepụta usoro, anyị na-nditịm mejuputa ISO9001, na anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ patent; na nditịm mejuputa China si mba ụkpụrụ GB / t11918 na GB / t11919, na jikotara aka ịmụta iec60309-1, - 2 mba ụkpụrụ.
Weipu nwere ngwaahịa zuru oke, nke a na-ekewa gaa n'usoro abụọ.
Usoro nke mbụ nke ngwaahịa bụ plọg, oghere na eriri njikọ, igbe njikọ jikọtara, igbe igbe njikọ, igbe igbe ọkọlọtọ, wdg maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'okpuru 1000V, 10a-125a. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji factory nhazi, n'ibu akụrụngwa, ewu na saịtị, chemical ụlọ ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ elu, mmiri na drainage, nsị ọgwụgwọ na ndị ọzọ na oru ngo.
Usoro nke abụọ kachasị na ngwaahịa bụ WS, WP, WF, WY, SP, SF, isi kristal na njikọta eletriki ndị ọzọ, nke dị ugbu a site na 3a ruo 200A, na-eguzogide voltaji site na 1000V ruo 3000V, nọmba pole 2 na 61, na ọkwa nchedo site na IP44 na IP68, nke nwere ike izute mkpa dị iche iche ma jiri gburugburu, kachasị mma na njikọta mmiri na-adịghị n'èzí.
Weipu nwere ikike R & D siri ike ma nwee ike ịmepụta njikọ dị iche iche dịka mkpa ndị ahịa chọrọ. Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji igwe ngwaọrụ, nkwurịta okwu, ike, ọkụ, locomotives, igodo na ndị ọzọ ubi.
Taa, ị nwere ike ịhụ ngwa njikọ WIPO gburugburu ụwa.
Nabata iji ngwaahịa anyị.